Shan su’aal oo jawaab u baahan kadib heshiiskii lagu gaaray Villa Somalia - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Muqdisho (Caasimada Online) – Shirkii madaxweyne Farmaajo iyo madax goboleedyada ee Villa Somalia ayaa lagu gaaray heshiis ka kooban 15 qodob, hase yeeshee waxaa weli ay su’aalo dul yaallaan qaar ka mid ah qodobaas.
Cabdirashid Khaliif Xaashi oo ah agaasimaha machadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage ayaa banaanka keenay shan su’aalo oo mudan in laga jawaabo, kuwaasi oo si dhab ah loogu cadeyn war-murtiyeedka shirkii doorashada ee dowladda federaalka iyo maamulada.
Cabdirashiid Xaashi ayaa sidoo kale ku taliyay in 1000 codbixiye ay noqdaan kuwa dooranaya kursi kasta oo baarlamaani ah doorashada 2020 & in lagu mideeyo codbixiyaasha gobol walba sidaa darteed ugu yaraan 35-kun oo codbixiye ay doortaan xildhibaan kasta.
Wuxuu xusay in doorkii xisbiyada ee shirkii Muqdisho uu maqnaa, taasi oo uu ku tilmaamay arrin markale muran horseedi karta, maadama uu dalku ku jiro marxalad xasaasi ah.
Hoos ka aqriso 5 su’aalo ee jawaabta u baahan:
— Sidee sida saxda ah odayaasha, dowladaha gobolka iyo bulshada rayidka ay u soo wada xulayaan 101 codeeye?
— Maxay noqon doonaan doorka saxda ah ee guddiga doorashada heer federaal iyo hay’adaha doorashooyinka heer gobol?
— Dastuurku wuxuu ku tilmaamayaa in baarlamaanka uu ka kooban yahay laba gole – aqalka sare iyo aqalka hoose – laakiin markii dambe, aqalka sare dhinac ayaa laga saaray. Sidaas darteed, Kalfadhi wada jir ah oo baarlamaan (laba gole) ma wuxuu ansixinayaa heshiiskan siyaasadeed?
— Xisbiyada Siyaasadda waxaa laga tuuray daaqada muranka ka hadlaya sanado badan; haddii mar labaad la tuuro, sababtu waxay ahayd in la sheego?
— Markii hore, qaar waxay u sheegaan dadka deggan Muqdisho inay yeelan doonaan 13 kursi oo ka mid ah Aqalka Sare, arrintan waxay u muuqataa in la tuuray, laakiin lama sheegin?
“Madaxweynaha federaalka iyo shanta maamul goboleed ee heshiiska nabadeed la galay waxay u baahan yihiin inay la wadaagaan inta kale ee Soomaalida xaqiiqda heshiiskooda maadaama ay u badan tahay inay wax ka qabteen arrimahan xasaasiga ah haddii aysan iyaga wax ka qabanna ay hadda si wanaagsan wax uga qaban lahaayeen,” ayuu yiri ugu dambeyntiina Cabdirashiid.
The post Shan su'aal oo jawaab u baahan kadib heshiiskii lagu gaaray Villa Somalia first appeared on Caasimada Online.